Shiinaha warshad mashiinka kululeeyaha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Boya
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah soo-saarista hoggaamineed ee xirmada jilicsan ee Shiinaha, Boya kuma siineyso oo keliya qalabka wax lagu duubo laakiin sidoo kale mashiinka baakadka faaruqinta ah.
Noqo bixiye xalalka isku-dhafan ee isku-dhafan, waxaan diiradda saareynaa oo keliya maalgashiga iyo kharashka hawlgalka ee macaamiisheena, laakiin sidoo kale natiijooyinka baakadaha oo dhammaystiran.
Waxaan ku siin karnaa mashiinno baako kala duwan oo ku habboon dhammaan noocyada wax baakadaha wax lagu duubo, sida mashiinka baakadaha faakiyuumka ku shaqeeya, mashiinka baakadka faaruqinta, mashiinka wax lagu buuxiyo (buufin), mashiinka baakadka faaruqinta ah, mashiinka baakadaha aan biyaha lahayn, mashiinka yaraanaya kuleylka, Baakadaha nooca qaboojiyaha hawada. .
Mashiinkaan baakada kuleylka ee foomka sameeya oo si otomaatig ah ula socda dalab balaaran oo loogu talagalay alaabada hilibka, waxyaabaha soy, noodle, cuntada badda, miraha, khudaarta, qajaarka, dawada, qalabka, ect ee faakiyuumka ama buufin la buufin karo.
Astaamaha muhiimka ah:
●Raadinta sawir-koronto, waxay u adeegsan kartaa filimka midabka daboola ama filimka fudud ee baakadaha si loo yareeyo qiimaha loona hagaajiyo heerka wax soo saarka.
●Isticmaalka caaryada isku dhafan, fududahay in la beddelo, iyo caaryada ayaa leh nidaamka qaboojinta
●Nidaamka dib u warshadaynta duugga geeska si loo ilaaliyo nadaafadda deegaanka
●Isdhaafka sare, nidaamka kala-goynta, mindi kumbuyuutarka lagu hagaajiyo.
Mashiinka baakadaha ee thermoforming-ka ee leh jirka aan fiicnayn ee adag ayaa leh faa'iidada cimri dherer .Sida muuqaalka tooska ah ee joogtada ah waxaa sidoo kale lagu gartaa heer tayo sare leh.
Iyadoo 20 sano injineer khibrad leh, Boya waxay bixisaa xalka ugu kharash-ool badan labada qalab iyo qalab loogu talagalay macaamiisheena iyadoo lagu saleynayo codsigooda iyo shuruudahooda. Si loo hubiyo inay tahay kalsoonida, dib-u-soo-saarista iyo ku-habboonaanta hawlgal ee macaamiil kasta. Mid kasta oo iyaga ka mid ah si shaqsi ah ayaa loogu qaabeeyey wax soo saarka ugu badan iyo isticmaalka ugu wanaagsan ee aagga la heli karo.
Waxaan hubin karnaa inaan si nidaamsan ula jaanqaado mashiinada qalabka baakadaha iyo in isdhexgalka mashiinka, sheyga, baakadaha iyo jawiga baakadka marwalba tixgelin la siinayo.
Qalabka baakadaha ee ku habboon mashiinkan fadlan hubi filimka sameynta iyo kan aan sameysnayn.
Hore: Mashiinka yaraynta kuleylka
Xiga: mashiinka qolka faakiyuumka